Fomba Fanta-daza Kokoa hihoatra ny morontsiraka amoron-tsiraka - Ellicott Dredges
Fomba Fanta-daza Kely hihoatra ny morontsiraka iray
Ponce de Leon Inlet, FL- Crews dia nahazo alalana tamin'ny Mpikambana amerikanina mpiady amerikanina (USACE) hanomboka ny fandatsahan-drà ao amin'ny Ponce de Leon Inlet. Izany dia tokony hanome azy antoka kokoa mba hivezivezana ireo anglers. Ankoatr'izay, ny dredging dia hanolotra famokarana fanampiny amin'ny tora-pasika ho an'ny morontsiraka eo akaikiny. Ny Atitany mihitsy dia tsy notazonina hatramin'izay folo taona mahery hoy ny tompon'andraikitra ao amin'ny Corps.
Ireo izay miasa eo amin'ilay tetikasa dia efa nanomboka ny fanetsiketsehana ny tetik'ady fanondrahana hydraulic valo volana naharitra valo volana. Raha ny marina, ny mpikambana ao amin'ny mpiasa ao amin'ny tetikasa dia asaina manala ny onjam-pasika any amin'ny 38,000 ft² (3,530 m²). Tokony hampitombo ny halalin'ny rano ny rano ao amin'ny saika 12 (3.65 m). Ny USACE no mamatsy vola ny vola ary manome ny Cavache (Incorporated) ao amin'ny Pompano Beach ny fifanarahana.
Izay ao amin'ny Dredge iray
Ny ekipa avy Cavache Inc., (fananana sy tantanan'Andriamatoa Adam Adache sy Andriamatoa Anthony Cavo), manana traikefa an-tariby 100 nandritra ny taona maro. Efa niasa tamin'ny tetikasa mitovy amin'izany toa ny tetikasa Distrika Florida Inland izy ireo. Ny ekipa avy any Cavache dia hampiasa an Ellicott 1170 "Dragon" dredge fantatra amin'ny anarana hoe "Maya Caelyn" hamita ilay tetik'asa.
Ny dredge cutterhead portable dia dredge antonony izay natao indrindra hanatanterahana tsara amin'ny toe-javatra mahazatra izay niaina tao amin'ny atletan'i Atlantika, ary ny fantsona fidirana avy any amin'ny ranomasina mankany amin'ny lalan'ny morontsiraka anatiny.
Antsipirian'ny tetikasa Ponce de Leon
"Ny tena mampiavaka amin'ity tetikasa manokana ity dia tetik'asa fametrahana toerana any ivelany izay mitaky fantsom-baravarana any ivelany. Ny halaviran'ny paompy dia lava kokoa, ary ny ekipanay dia mampiasa mpanentana maro hamita ilay tetik'asa », hoy ny fanamarihan'i Anthony Cavo, Andriamatoa Fitsipika momba ny fitsipika.
Ny taolam-paty sy fasika izay niangona nandritra ny Hurricanes Irma sy i Matthew dia niteraka fanaovana poa-basy mahery vaika. Eo ihany koa ny akora nateraky ny fisolokiana dia voatobaka ao amin'ny Ponce de Leon Inlet. Entina any amin'ny toerana akaiky azy ireo akora ireo ary ampiasaina hanampiana ireo torapasika misy zezika. Raha vantany vao vita ny fizotran-drongony dia mivoatra haingana ny rano eo amin'ny faritra akaiky. Ny fanodinana ny anatiny dia tokony hanatsotra ny sisin-tany mandritra ny rivo-doza manaraka mba hanamora ny fandehan'ny sambo malalaka.